Ukunyusa isitshixo se-adventure sokuvulwa komda wase-US nase-Canada
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » Ukunyusa isitshixo se-adventure sokuvulwa komda wase-US nase-Canada
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Sports • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
ICanada ibambe ubutyebi bamava okhenketho agubungela indalo kunye neendawo zawo ezisezidolophini.
Abakhenkethi base-US baziwa njengezona zisebenza kakhulu kwihlabathi liphela.
Kwi-2020, inkxalabo malunga nokuqina komzimba kunye nempilo inyukile e-US.
Ukhenketho lokuzonwabisa lungahlelwa njengamava 'athambileyo' okanye 'anzima' kuxhomekeke kwinqanaba lomngcipheko obandakanyekayo kwimisebenzi nganye.
The Urhulumente waseKhanada kutshanje ubhengeze ukuba imida yayo iya kuvulwa kwakhona kubakhenkethi base-US ukusuka nge-9 Agasti 2021. Imida yaseCanada ivaliwe ukusukela nge-Matshi 2020; Ke ngoko, eli nyathelo liphawula indawo ebalulekileyo ekubuyiseleni ukhenketho kwindawo ekuyiwa kuyo kwaye enye indlela yeCanada yokufumana kwakhona inkcitho elahlekileyo yase-US ngo-2020 kukukhuthaza amava amnandi.
I-US yeyona ntengiso iphambili Khanada. Phambi kobhubhane, iCanada yafumana i-15.1 yezigidi zabakhenkethi base-US kwi-2019, eyabalelwa kwi-68% yabo bafikayo kwilizwe liphela. Kunyaka ophelileyo kufike ukufika okuvela e-US ukwehla nge-86.1% ngonyaka-on-year (YoY), ebonisa ukubaluleka kokuvulwa komda kwakhona.
Abakhenkethi base-US baziwa njengezona zisebenza kakhulu kwihlabathi liphela. Ukhenketho / imidlalo yayiyeyona ndidi yesithathu ithandwayo kubaphenduli baseMelika kuvavanyo lweshishini lwamva nje. Oku kubonisa ukuba olu hlobo lohambo lwalusele ludumile kubakhenkethi baseMelika ngaphambi kobhubhane we-COVID-19.
Kwi-2020, inkxalabo malunga nokuqina komzimba kunye nempilo inyukile e-US. Uphando lwakutsha nje lufumanise ukuba i-55% yabaphenduli baseMelika 'babexakeke kakhulu' okanye 'bexhalabile' malunga nempilo yabo. Ngenxa yobume bokusasazeka kwe-COVID-19 phakathi kwabantu abangasebenziyo, oku kungenzeka ukuba kwandise iinkxalabo ezinxulumene nempilo iyonke, ukukhuthaza abathengi base-US ukuba basebenze ngakumbi.
Ukhenketho lokuzonwabisa lungahlelwa njengamava 'athambileyo' okanye 'anzima' kuxhomekeke kwinqanaba lomngcipheko obandakanyekayo kwimisebenzi nganye. Imisebenzi ethambileyo inokubandakanya amava njengokuhamba, ukubukela iintaka kunye nokuloba. Kwelinye icala, imisebenzi enzima inokubandakanya ukuskiya, ukurhafisa amanzi amhlophe kunye nokutsiba nge-bungee. Okudala kwintengiso ekujoliswe kuyo, imisebenzi encinci esekwe kumngcipheko abaqhele ukuyinqwenela. Ke ngoko, oku kubonisa ukuba ukhenketho lwe-adventure lunokubhengeza kuwo onke amaqela eminyaka.